Puntland oo koox caafimaad u dirtay deegaanada roobabku ka da’een ee loo hayaamay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo koox caafimaad u dirtay deegaanada roobabku ka da’een ee loo hayaamay
January 4, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Puntland oo koox caafimaad u dirtay deegaanada roobabku ka da’een ee loo hayaamay. [Xuquuqda Sawirka: Puntlandi]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah koox dhakhaatiir ah u dirtay deegaanada ay dhawaan ka da’een roobabku si ay halkaas adeegyo caafimaad u siiyaan dadka halkaas u hayaamay, sida uu sheegay sargaal wasaaradda katirsan.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirisaaq Xasan Xirsi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kooxda caafimaadku ay ka howlgali doonaan inta u dhaxaysa degmooyinka Dangorayo iyo Xaafuun halkaas oo uu sheegay in ay xanuuno ka dilaaceen.
Dr. Cabdirisaaq ayaa xusay in ay kooxda caafimaadka ay isugu jiraan dhakhaatiir, kalkaaliyaal iyo wacyigeliyaal kuwaasoo loo dhammeystiray qalabkii iyo daawooyinkii ay ku shaqeyn lahaayeen.
April 10, 2017 Sarkaal katirsan Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari gudaha Muqdisho